Forum serasera malagasy Aza mano aotran'ahy: mahaiza mifidy toerana hianarana tsara! - Dinika forum.serasera.org
Aza mano aotran'ahy: mahaiza mifidy toerana hianarana tsara!
Lohahevitra : Fanatanjahantena
Fitohizan'ny hafatra : Aza mano aotran'ahy: mahaiza mifidy toerana hianarana tsara!
harisoa32 - 26/03/2019 13:46
Izaho Malagasy mipetraka sy mianatra aty Frantsa. Efa telo taona ahy no monina teto Ary efa azo lazaina fa efa patra ihany. Ny fihainana aty moa dia misy mahatsara azy, fa koa misy maharatsy azy, aleo tsorina. NY imantara eto aloha, dia try aotran’ny talocha intsony: talocha kanak, afaka makaty dia afaka miova filiere fa icao, dia val miainga any dago, dia int filiere ins Frana no try maintsy tazomina satria raha tay izana, dia annulé ny visa de séjour eto Frantsa.
Ny hitako koa, dia lasa sarotra ny mitad asa eto, indrindra2 moa redefa vahiny ianao. Eo aloha ny “racisme”, Ary eo koa ny favoritisme, satire maro moa ireo frantsay eto Etsy manana asa ka ireo aloha no ataxy priorité. Maro creo Malagasy manana diplome de medecine, nahavita tsars fa dia miafara lasa “asistant” any @ hopitaly public ireny. Mampalahelo ihany clay situation. Maro koa ire gasy eto laFrantsa, Etsy mijanona mianatra satria @ izay, afaka mi-renouveller visa oba hijanonana eto. Ny tena marina koa dia ny tenako dia somary voafitaka tany Mada amin’ireny restka brochure atao’ny “établissement” privé ety ireny, écoles privées sns, ka tonga taty nieritreritra hoe hianatra dia alita asa any eo, kay ny réalité aty tena hafa Ary mahadiso-fanatenana.
Try ho lazaiko sto amorini creo fasahiranana nata visa tana @ ambassade, fa nangatahany datolo creo antontan-taratasy sian-karazany plus ny emmerdemment rehetra.
Na zany aza, tsy tena mahatma-po ilay aty (na hoe nosy fotoana nahafinaritra aza teto, sy ny hoe afaka ni voyage kely taty aza izaho), sairia ny fihainana ata dia Metro-boulot dodo, routine be, moa koa ny olona, somary misy toetra no sady manao fisainana hoe “tu es chez nous, tu vas manger notre pain”. Izay no tena tsy tiako eto Frantsa eto (na dia hoe mahafinaritra aza ny majorité an’ireo namana ao am-pianarana).
Misy namako izao lasa nianatra any Allemagne, fa tena tøy mitovy ny expérience-nay. Izy, tena tsapako hoe “joyeuse” izy any Ary efa manampitra ny diplome d’ingénieur, ary fantatro fa ahazo 2 na 3 taona izy hitadiavana asa (fa tay 6 mois key kahihatra key aotran’ny eto LaFrantsa eto). Hitako izy hoe Etsy nanenina t@ choix-ny nakany Allemagne. Noteniny hoe any koa misy racisme, fa raha Samy hiaritra hoy izy, aleo aza miafy fanavakavahana aty @ rainiboto aty (satria any misy lalana enditra be momba’ny resaka discrimination, fa tay aotrany eto France) toa izay any Frantsa any.
Ho an’ireo mpianatra indirai izay mikasa ho aty: marina fa “il y a des hauts et des bas”, fa miheritrereta tsara. Raha ho ata ianareo, aza dia mifidy an’ireny institut privé ireny (sauf irez tena efa réputé mondialement) fa ny ireny mahazana, vola Vfotsiny no tadiaviny, nef try dia hitako hoe inn no tena mampihavaka azy @ oniversite public. Sady, mahazana, ireny insitut privé ireny, na “homologués” aza, dia try izay lontra no hanome chance-nao any aoriana ahitana asa eto Frantsa (ny eto koa moa efa mihidy be daholo no sady misy favoritisme hoy aho tetsy ambony…tena misy io indrindra moa depuis an’iny resaka Charlie hebdo iny!!!). De plus, misy lehilahy Gasy izay nifindra monina any Singapour any fa efa leo ny teto (tse neta nahazo asa mihitsy, nefa mahay), dia izy nianatra t@ ireny institut privé ireny (genre inlay institut tara brochure be misy mpianatra mitsiky be sy joeyeux be ireny mihitsy ilay izy, tany Lyon tany), fa tena izao, lasa mi-trimme mikarakara papier satrie ilay institut io tsy “reconnu” (néfaste homologué par le Gvt français io institut io eto Frantsa eto). Izay izy, voatery tsy satry mianatra erin-taona sy tapany any Singapour ahazahoana diplome équivalent. Izay inlay hoe…aleo Tihany imantara amin’na “université publique” fa ireny Mahayana reconnu fana, no sady gratuit. Aleo aza amiko, vai vita ny cab any Dago, dia miditra université publique aty fa try miditra cursus privé ireny, fa indraindray ireny piège no sady vola fotsiny, indrindra moa redefa mampiseo an’ireny brochure be mpianatra mitsiky be na mitady hampiseo “cursus aotrany diso idéal” ireny, dia aleo mitandrina!
Izaho aza izao, misy havako mitady fianarana aty ivelany aty, fa tena teneniko hoe “Mijereva université coté Allemagne, na Espagne” raha tia ho eto Eoropa, na aleo aza koa mandera Suède any fa any koa malaza hoe tsara ihany hono. Na koa, mana aotran’ilay GAsy namako hoe making Quebec, io koa hevitra tsara. Fa i Frantsa iray , Belgique roa (andro ratsy, mponina raciste no mpanavakavaka, terrorisme koa feno, manoroan-dava, be an’ireny “obédés sexuels ireny..mahatsiravina), ire dia firenena Samy carotta ahazahoana visa, no sady manomboka mankahala vahiny, indrindra isika avy aty Afrika, no be préjugés, no sady tsy misy asa fa asa manambany no misy raha ho hisy aza fa ireny koa ange aty efa hiadiana @ afrikana ee!
fahamaroprisca - 09/04/2019 15:50
maninona ra miverina sa tss moyen hiverenana
hasina34 - 01/05/2019 10:06
ka mety hoe mbola tsy vita ny fianarany ohaotra...tsy hay izany....
Isika malagasy koa ny tena marina, efa mila mitady toerana hafa akaotran'io Frantsa Frantsa t** io fa aiza ve, efa ampifilafilaina, dia mbola milahitra eo @ TLS eo ihany!!! Mba mahaiza marina mijery lalana hafa fa misy anie ilay iz e. Aotrany misy olona aza ato @ forum ato manome torohevitra lalana hafa fa ilay article aloha lava, fa misy idee tsara. Aotrany ankizy mianatra any nouvelle-zelande ilay izy fa raha tadiavinao, hitanao.